မွန်ပြည်သစ်ပါတီစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် လယီကောင်းနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် » Myanmar Peace Monitor
မွန်ပြည်သစ်ပါတီစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် လယီကောင်းနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ JMC –U အဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦးတို့သည် နီပေါနိုင်ငံသို့ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့က သွားရောက်ခဲ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်များကို တစ်ပတ်ကြာလေ့လာခဲ့သည့်ခရီးစဉ် တွင် ပါဝင်ခဲ့သူ မွန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် MNLA စစ်ဦးစီးချုပ် “ဗိုလ်ချုပ် လယီကောင်း” အား မွန်သတင်းအေဂျင်စီ အယ်ဒီတာ ဗညားအောင် မွန်ဘာသာဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကို မြန်မာဘာသာသို့ အနီးစပ်ဆုံး ဘာသာပြန်ဆိုသည်။
မေး-ဗိုလ်ချုပ်တို့အနေနဲ့ ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သွားရောက်လေ့လာခဲ့တာ သိရပါတယ်။ ကနဦးအနေနဲ့ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို သုံးသပ်ပေးပါလား။
ဖြေ-ကျနော်တို့ နိုင်ငံ Peace Process တစ်ဆို့ခဲ့တာဟာ စတင်အကောင်အထည်ဖော်ကတည်းကဖြစ်ခဲ့တာလို့ ဆိုရပါမယ်။ အခုတော့ ရှေ့ဆက်သွားလို့မရသလို ဖြစ်နေပါပြီ။ အဲဒီအပေါ် ပြန်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါ ကျနော်တို့ဘက်က JMC ယန္တရားတွေ ထိရောက်မှုရှိမှသာ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေ ဆွေးနွေးဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာ ပိုပြီးခရီးရောက်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆစရာရှိလာတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ လတ်တလော ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ သေနတ်သံတွေ မစဲသေးပါဘူး၊ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်မရေးထိုးရသေးတဲ့ မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလိုပဲ လက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့ ရှမ်း RCSS နဲ့ ကရင် KNU နယ်မြေတွေမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတာကိုကြည့်ရင် JMC အကောင်အထည်ဖော်မှုတွေဟာ မထိရောက်ဘူးလို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒီတော့ ကျနော်တို့ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သင့်သလဲဆိုပြီးတော့ အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေကို သွားရောက် လေ့လာရတာပေါ့၊ အဓိကအားဖြင့် တပ်မတော်ဘက်က ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းတွေက ခေါင်းဆောင်တွေ ဒီလိုအတူတကွ သွားရောက်လေ့လာကြတဲ့အခါမှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရလည်း ရင်းနှီးမှုပိုမိုရှိလာကြမယ်။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ရင်းနှီးမှုတွေရှိလာကြပြီးတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တဖက်နဲ့တဖက် အပြန်အလှန် နားလည်မှုတွေရလာကြမယ် ဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေကလည်း တစ်ပိုင်းပါဝင်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ လက်ရှိအောက်ခြေမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေအမှန်ကို JMC မှာပါဝင်နေတဲ့ နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေ သိရှိအောင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုကြဖို့၊ အခြေအနေမှန်ကို သိရှိထားရင် ကိုင်တွယ်တဲ့အခါ ပိုပြီးလွယ်ကူလာပါလိမ့်မယ်လို့ မြင်တယ်။
မေး-လက်ရှိ ကျနော်တို့နိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမယ်လို့ မြင်လဲ?
ဖြေ- သူများနိုင်ငံတွေမှာ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ သူတို့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေကို ကျနော်တို့ ပုံတူကူးချလို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ နော်ဝေးနိုင်ငံ ခရီးစဉ်မှာဆိုရင် ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ ကိုလံဘီယာ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ ကိုလံဘီယာ ငြိမ်းချမ်းရေးမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အဲဒီငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ နော်ဝေးက ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ကုလသမဂ္ဂ UN အကြီးအကဲတွေ၊ ဖိလစ်ပိုင်ငြိမ်းချမ်းရေးမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေနဲ့ Workshop တွေလုပ်ခဲ့တာလည်း ရှိပါတယ်။ သူ့တို့နိုင်ငံအနေအထား သူတို့နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပုံစံနဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့ကြတာပါ။ ကျနော်တို့နိုင်ငံဆိုရင်လည်း ကျနော်တို့နဲ့ သင့်တော်တဲ့ပုံစံ၊ ကျနော်တို့နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်တွေကို ကျနော် ဖာသာ ကျနော်တို့ ဖန်တီးတည်ဆောက်သွားရပါမယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေ လာလုပ်ပေးလို့လည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ ဆိုလိုတာကတော့ ကျနော်တို့ အစွမ်းအစနဲ့ပဲ ကျနော်တို့ တည်ဆောက်သွားရမှာ ဖြစ်တယ်။
မေး- DDR-SSR နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်ချက်တွေကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသလဲ?
မှတ်ချက်။ ။ DDR-Disarmament (လက်နက်ချခြင်း) Demobilization(ဖျက်သိမ်းခြင်း) R-Reintegration (ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး)။ SSR-Security Sector Reform(လုံခြုံရေးကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး)
ဖြေ- DDR ဆိုတာ တဖက်အဖွဲ့အစည်းကပဲ လုပ်ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး၊ လိုအပ်ရင် အစိုးရရော တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပါ နှစ်ဖက်စလုံး လုပ်သင့်တယ်။ နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာ အဲလိုရှိခဲ့တယ်။ DDR နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ချင်းမိုင် UNFC မှာလည်း ကျနော်တို့ Workshop တွေ လုပ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ တဖက်တည်း လုပ်ရတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ အခုကျနော်တို့မှာ ဖြစ်နေတာက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုပဲ DDR လုပ်ဖို့မြင်နေကြတယ်၊ တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေက စစ်ရှုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး၊ အပစ်ရပ် သဘောတူကြတာပါ။ ကျနော်တို့မှာ နိုင်ငံရေးပြဿနာကို အရင်ဖြေရှင်းကြရမယ်၊ ပြီးတော့မှ DDR-SSR နဲ့ ပတ်သက်တာ ဆက်လုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ NCA မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အနှစ်သာရကို ချုပ်ပြီးပြောရင် DDR ကို ဘက်တစ်ဖက်ကပဲ လုပ်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး၊ လက်ရှိကာလမှာလည်း DDR ခေတ်မရှိတော့ဘူးလို့ ဆိုကြတယ်။ အကယ်၍ DDR လုပ်ဖို့လိုအပ်ရင်တော့ တပ်မတော်ရော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေပါ အချိုးကျ လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံအတွက် SSR ပဲ လုပ်သင့်တယ်လို့ အကြံပြုတာလည်း ရှိပါတယ်။
မေး-NCA စာချုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘာတွေထောက်ပြစရာရှိလဲ?
ဖြေ- နိုင်ငံတကာ အပစ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်တွေမှာ အချိန်အတိုင်းအတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Limit ရှိပါတယ်။ တစ်နှစ်အတွင်း နှစ်နှစ်အတွင်း သုံးနှစ်အတွင်း ဘာတွေလုပ်ဆောင်ရမယ် ဘာတွေအကောင်အထည် ဖော်ရမယ်ဆိုတာမျိုး Timeline ရှိကြတယ်။ တိုက်ပွဲတွေလည်း အမှန်တကယ်ရပ်တန့်သွားအောင် စာချုပ်ပါအတိုင်း အကောင်အထည် ဖော်ရပါတယ်။ ကျနော်တို့ NCA မှာက အဲလိုမျိုးမဟုတ်ဘူး၊ လွှတ်တော်က အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာမှမထိရ မကိုင်ရဖြစ်သွားပြီ။ လိုအပ်လို့ဖြည့်စွက်ရမယ်ဆိုရင်လည်း အခွင့်မရှိတော့ပါဘူး။ အပစ်ရပ်စာချုပ်ဆိုတာ အချိန်ကန့်သတ်ချက် ရှိသင့်တယ်။ ပြင်ဆင်ခွင့်လည်း ရှိသင့်တယ်။ ပြင်ဆင်ခွင့် မရှိဘူးဆိုဦးတော့ အလုပ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေ ဥပမာ (ToR, SOP) ရှိရပါမယ်။ အခု ဆက်ပြီးလည်း အကောင်အထည်ဖော်လို့မရ ဖြစ်တယ်၊ ဒီအတိုင်း ဆက်ပြီးငြိမ်သက်နေရတာက အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူးလို့ ဆိုချင်တယ်။
မေး-နောက်ဆုံး ချုပ်ပြီးတော့ ကျန်ရှိတဲ့အချက်တွေကိုလည်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားပေးပါ ခင်ဗျာ။
ဖြေ- လက်ရှိ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာ ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးတွေကြောင့် နှောက်နှေးတစ်ဆို့နေရတာကို နော်ဝေးသံတမန်တွေအပြင် နိုင်ငံခြားသံတမန်တွေနဲ့ စကားပြောရတဲ့အခါ သူတို့ နားလည်သဘောပေါက်ပြီးသားပါလို့ပဲ ပြောချင်တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို နော်ဝေးတို့ ဆက်ပြီးကူညီနေတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ တဖက်မှာ JMC အကောင်အထည်ဖော်မှု ထိရောက်မှလည်း ကျနော်တို့ ငြိမ်းချမ်းရေးအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ မြင်တယ်။ နောက်ပြီး NCA စာချုပ်မှာ အချိန်ကန့်သတ်ချက်တွေ ထားရှိသင့်ပါတယ်။ NCA အပေါ် အဓိပါ္ပယ် နားလည်လက်ခံတာချင်း တူညီနေရမယ်။ လက်ရှိ ကျနော်တို့ဆီမှာဖြစ်နေတာက စာချုပ်အပေါ် နားလည်လက်ခံသဘောပေါက်ကြတာ မတူဘူးဖြစ်နေတယ်။ နောက်ပြီးတော့လည်း ပြည့််စုံသေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကို ပြင်ဆင်လို့လည်းမရဖြစ်နေတော့ နိုင်ငံတကာက အပစ်ရပ်စာချုပ်အင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ မတူဘူး ဖြစ်နေတာပေါ့။ နောက်တစ်ချက်က ၂၀၀၆ ကနေ နီပေါနိုင်ငံပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ DD နှစ်လုံးကို အကောင်အထည်မဖော်ခဲ့ဘူးလို့ ကျနော်တို့ဆီလာရောက်ရှင်းပြတဲ့ နီပေါအငြိမ်းစား စစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းက ပြောပြတယ်။ R-Reintegration ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုပဲ သူတို့အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူပြောတာက ငြိမ်းချမ်းရေးအောင်မြင်အောင် အကောင်အထည်ဖော်တဲ့နေရာမှာဆိုရင် သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် နှစ်ဖက်စလုံး ထိုက်သင့်သလောက်တော့ အနစ်နာခံရမှာပဲတဲ့၊ Win+Win ဆိုပြီးပြောကြတာပဲရှိပါတယ်၊ နှစ်ဖက်စလုံး ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်တာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့။ နောက်ဆုံးပြောချင်တာက ခုနကျနော် ပြောပြခဲ့သလိုပါပဲ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ ကျနော်တို့နိုင်ငံသားတွေ အချင်းချင်းကပဲ ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။